Pocket PC dia nifindra hanokatra sokajy fitaovana | Avy amin'ny Linux
Pocket PC dia nifindra hanokatra sokajy fitaovana
Darkcrizt | | About us
Popcorn Solosaina nanambara ny fanovana ny sokajy ny fivoarana mifandraika amin'ny Kitapo Popcorn Pocket (Pocket PC) hanokatra sokajy fitaovana, amin'izay dia mampahafantatra an'izany vantany vao mivoaka ilay fitaovana amidy ambanin'ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 ary havoaka ny rakitra famolavolana PCB, skema, modely vita pirinty 3D ary torolàlana momba ny fananganana trano.
Vaovao tsara izany, satria ny fampahalalana navoaka dia ahafahan'ny antoko fahatelo sy ny mpanamboatra mampiasa ny Pocket PC ho prototype ho an'ny fampandrosoana ny vokatra ary handray anjara amin'ny ezaka iraisana hanatsarana ny fitaovana.
Ao anatin'ny ezaka hatao mangarahara kokoa amin'ny fivoarana farany amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana, dia namorona kofehin'ny vondrom-piarahamonina izay hametrahanay ireo vaovao farany rehefa mitranga izany.
Raha te hifikitra amin'ny endrika farany na te hiditra ao anaty ianao Kitapo paosy , dia namorona tahiry ao GitHub ho an'ny fisie rakitra farany. Ny asa dia manana fahazoan-dàlana Creative Commons 3.0 avy any Etazonia.
Ho an'ireo izay tsy mahalala hoe inona ilay Pocket PC dia tokony ho fantatr'izy ireo izany solosaina paosy ity, antsoina koa hoe PDA (Mpanampy nomerika manokana). Solosaina kely izy io, natao hizahana ny toerana kely indrindra ary mora entina, izay manome fahaiza-manao mitovy amin'ny PC desktop.
Amin'ny tranga Pocket PC (Popcorn Computer) East solosaina finday miaraka amina bokotra mini bokotra 59 sy efijery 4,95 inch (1920 x 1080, mitovy amin'ny efijery finday Google Nexus 5), izay Natolotra tamina processeur ARM Cortex-A53 quad-core (1,2 GHz), RAM 2 GB, eMMC 32 GB, Wi-Fi / Bluetooth 2,4 4.0 GHz.
Ny fitaovana dia misy batterie 3200 mAh azo esorina sy 4 mpampifandray USB-C 10. Fitaovana azo alain-tahaka miaraka amin'ireo modely onjam-peo GNSS sy LoRa (Long Range Wide Area Network, mamela ny fandefasana data mandritra ny halavirana XNUMX km).
Ny maodely ifotony dia azo alaina mialoha ny vidiny $ 199 ary ny kinova LoRa ho an'ny $ 299 (amidy ho sehatra hamoronana fampiharana LoRa).
Ny mampiavaka ny fitaovana dia ny Fampidirana chip infineon OPTIGA TRUST M ho an'ny fitehirizana fanalahidy manokana, fanatanterahana mitokana ny asa cryptographic (ECC NIST P256 / P384, SHA-256, RSA 1024/2048) ary ny famoronana isa isa. Debian 10 dia ampiasaina ho rafitra fiasa.
Nahafantatra zavatra betsaka tamin'ny famokarana Original Popcorn farany izy. Tsy nahazo ny haavon'ny fanohanana nampanantenain'ny mpanamboatra USB-C IC izahay fa nisafidy ny hikirakira ny rafitra USB Power Delivery.
Araka izany, nanova ny filaharan'ny Kitapo paosy hampiditra vahaolana tokana matanjaka avy any Texas Instruments.
Amin'ity vahaolana vaovao ity dia nanampy tamin'ny famolavolana IC fiarovana fiarovana amin'ny seranan-tsambo miaraka amin'ny fiarovana ESD sy IC fiarovana izahay ary koa avy any Texas Instruments amin'ny seranana rehetra. Izany dia hahatonga ny endriny ho matanjaka kokoa amin'ny toe-piainana tsy mandeha amin'ny herinaratra.
Farany, Popcorn Compute milaza izany hanana ny rindrambaiko vonona sy fampivoarana tsara ny Pocket PC, nangatahana fanampiana avy amin'ny fiarahamonina mba hahazoana antoka fa misy ny lafin'ny vokatra azo havaozina izy ireo ary koa tsy mila takelaka voajanahary. Mba hahatratrarana izany dia takiana ny ezaka ataon'ny fiarahamonina hijerena sy hizaha vahaolana vaovao alohan'ny handefasana azy ireo any amin'ny lisitry ny mailaka Linux Kernel.
Izany no antony miantso izay liana hanohy ny ezaka fampandrosoana ary ireo izay te-hiditra dia afaka miditra amin'ny dinika izay efa anisany maro no miditra ao fanohanana fampandrosoana Linux natsofoka.
Ankoatra izany, voalaza fa novaina ny fisehon'ny fitendry ho afaka ampidiro ny hevitra avy amin'ny tolo-kevitry ny fiaraha-monina ary ny fampiharana ireo prototypes vita pirinty 3D.
Ny bara habakabaka dia nitarina mba hahafahana manindry avy amin'ny toerana mora aina sy fanovana kely vitsivitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Pocket PC dia nifindra hanokatra sokajy fitaovana
Nosakanan'ny Apple ny fampiharana Wordpress ho an'ny iOS satria tiany hampiana ny safidin'ny fividianana
Island Racer sy lalao hafa miampita sehatra tsara hanandramana amin'ny Linux